International Hotel Projects - Armati Hotel Project Na Asia
Armati Hotel Project Na Asia
Otu n'ime Armati 5 amalite hotel oru ngo na Thailand, Asia,-nnọọ ka gaa na nke a hotel ịhụ anyị foset.
Armati 541 usoro foset catalouge biko na-esonụ:
Mmadụ Bịa ka Royal Orchid Sheraton Hotel & ụlọ nche, ihe mara 5-kpakpando nkwari akụ dị na Thailand isi obodo Bangkok. Nsogbu na enchanting Chao Phraya River, ihe niile anyị na 726 ọbịa ụlọ ngosi unobstructed osimiri echiche.
Royal Orchid Sheraton Hotel & Ụlọ Elu nakwa awade 28,000 square ụkwụ conferencing na-anọ amụ ihe, nakwa dị ka venues maka nkecha na-agaghị echefu echefu ihe na agbamakwụkwọ. Iri nri na-na ezinụlọ ma ọ bụ enyi na onye offour ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ma ọ bụ ijide ekele shuttleboat ka Bangkok igwe ụgbọ okporo ịchọpụta ọzọ nke obodo ahụ na-akpa ike iri idaha. Abụọ resotu-style igwu ọdọ mmiri, a spa gbasapụrụ nnọọ agbasapụ, ịkụ tenis, na lush meditative ubi-akpali gị na-eche gị mma ma hụ na-agaghị echefu echefu ọnụnọ na anyị 5-kpakpando osimiri Bangkok hotel.